UPAP: manaraka ny teknolojia ny paositra | NewsMada
Nanomboka, omaly sy anio eto Antananarivo, ny fivoriambe iraisam-pirenena tsy ara-potoana ataon’ny Fiombonambe afrikanina mikasika ny paositra (Upap). Hovolavolaina ny paikady, mamaritra ny fepetra sy ny lalàna mifehy ny paositra, iraisan’ny firenena aty Afrika miisa 45 mpikambana ao anatin’ny Upap.
Nilaza ny tale jeneralin’ny Paositra malagasy, Rakotomalala Augustin, fa tamin’ny taona 2016 ny fivoriambe ara-potoan’ny Upap, atao isaky ny efa-taona, izany hoe, amin’ny taona 2020. Natao ity fivoriambe tsy ara-potoana eto Antananarivo ity, hampanarahana ny lafiny paositra amin’ny fivoaran’ny teknolojia niomerika ny sehatry ny paositra. Haroso any amin’ny fivoriambe manaraka any Addis Abeba ny fehinkevitra mivoaka amin’ity fotoana ity.
Tsiahivina fa anisan’ny ataon’ny paositra, ary anisany ny Paositra malagasy, ny fifanakalozam-bola eto an-toerana sy any ivelany, ny fitondrana entana sy/na antontan-taratasy. Nampahafantarina tamin’ny fomba ofisialy, omaly, ny fampiasana ny Postransfer, marika fifanakalozam-bola iraisam-pirenena iraisan’ireo paositra aty Afrika. “Mora lavitra miohatra ny fifanakalozam-bola hafa ny Postransfer”, hoy ny DG-n’ny Paositra malagasy.